आशा लघुवित्तको नाफामा उछाल, रिजर्भमा १३६.५०%को छलाङ Bizshala -
आशा लघुवित्तको नाफामा उछाल, रिजर्भमा १३६.५०%को छलाङ
काठमाण्डौ । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा १० करोड ६७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ।
आज सार्वजनिक तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाको यो खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २६७.८१ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले २ करोड २९ लाख रुपैयाा आर्जन गरेको थियो।
समीक्षा अवधिमा संस्थाको सञ्चालन मुनाफा १५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रहेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाको सञ्चालन घाटा ७२ लाख रुपैयाँ बढी रहेको थियो।
संस्थाको खुद ब्याज आम्दानी ७८.४० प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा १० करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहेको यस्तो आम्दानी समीक्षा अवधिमा बढेर १८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भएको छ।
यो अवधिमा संस्थाले २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ सापटी लिई ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म संस्थाले १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सापटी लिई २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको थियो।
संस्थाको रिजर्भको आकार १३६.५० प्रतिशतले बढेर १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँको उचाइमा पुगेको छ। गत वर्ष रिजर्भमा ६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
चुक्तापुँजी २६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ रहेको संस्थाको वार्षिकीकरण प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ५३.२९ रुपैयाँ रहेको छ। मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) ३२.४६ गुणा रहेको संस्थाको प्रतिसेयर नेटवर्थ १५७.४० रुपैयाँ रहेको छ।
Asha Laghubitta bittiya Sanstha Limited Q3 2077/78
यी लघुवित्तले एनएफआरएस विधिबाट वित्तीय विवरण तयार
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको चौथो...
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको लाभांश पारित गर्दै रिलायन्स फाइनान्स...
साना किसान विकास लघुवित्तको नाफा रु. ४६.५३ करोड, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले...
आजसम्म कायम सेयरधनीले जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको बम्पर
काठमाण्डौ । जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले...
यस्तो छ तेस्रो त्रैमासमा आरएसडीसी लघुवित्तको वित्तीय अवस्था
काठमाण्डौ । आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको...
एनएमबि लघुवित्तको नाफा १७५.३६%ले बढ्यो, ईपीएस रु. ३१.२७
काठमाण्डौ । एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको...
नेशनल माइक्रोफाइनान्सद्वारा अधिकांश वित्तीय सूचकमा छलाङ,
काठमाण्डौ । कोरोना कहरबीच पनि नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त...
कोभिड–१९ का कारण बेष्ट फाइनान्सको वार्षिक साधारणसभा स्थगित
काठमाण्डौ । बेष्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले डोकेको आफ्नो २४ औँ...